Qaab-dhismeedka astaanta: waxa uu yahay, sida loo soo bandhigo iyo sifooyinka qaarkood | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 09/04/2022 10:17 | Design Graphic, General
Xigasho: Qodob Ñ
Marka aan naqshadeyno calaamad gaar ah ama aan fulineyno mashruuc calaamadeyn ah, waxaan inta badan isku aragnaa baahida loo qabo in aan ku hindiso daryeelka iyo abaabulka ugu weyn ee suurtogalka ah. Sababtan awgeed, qaar badan oo ka mid ah naqshadaha aan sida caadiga ah ka helno suuqa calaamada ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo sifooyinkooda jireed ama maskaxeed.
Si si wanaagsan loogu qaybiyo, waxaa la dejiyay qorshe ama hab lagu meel mariyo hadba sida uu mid kastaaba ka tarjumo, waana sababta qoraalkan ku soo baxay.Waxaan u nimid inaan kaala hadalno qaab-dhismeedka astaanta iyo sida ay u saamaysay naqshadaynta garaafyada iyo qaybta suuqgeynta dhijitaalka ah.
1 Qaab-dhismeedka brand: waa maxay?
2 Noocyada kala duwan
2.1 Moodooyinka monolithic
2.1.1 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
2.2 model la ansixiyay
2.2.1 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
2.3 Qaabka summada madax-bannaan
2.3.1 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
3 Sababaha loo abuuro naqshad dhisme
3.1 Koritaanka dabiiciga ah
Qaab-dhismeedka brand: waa maxay?
Qaab-dhismeedka astaanta waxa lagu qeexaa sida matalaadda nidaamka macquulka ah ee calaamaddu ku soo rogi karto maskaxda macaamiisheeda. Sidan, waxaa suurtogal ah in lagu qaabeeyo shirkad suuqa ka jirta oo loo dhigo sida ugu habboon ee suurtogalka ah.
Waxa kale oo lagu qeexaa oo loo yaqaan xeelad ama qorshe hal abuur leh, maaddaama sidan oo kale, Waxaan ku guuleysanay inaan si wanaagsan u dhigno astaantayada si aad u dhakhso badan oo sahlan. Sidoo kale, ma maamulno oo kaliya inaan korno, laakiin sidoo kale in dhagaystayaasheenna bartilmaameedka ahi ay si fiican u yaqaanaan ujeeddooyinkayaga.
Sababtan awgeed, aad bay muhiim u tahay in maskaxda lagu hayo mar kasta oo aan fulinayno mashruuc aqoonsi. Tan iyo marar badan, waxaan naqshadeynaa calaamado iyada oo aan lahayn wax macno ah si loo muujiyo, iyada oo aan ujeeddooyin lahayn, iyada oo aan lahayn hawlihii hore, iyada oo aan lahayn sawir si ay u bixiso kuwa kale. Waxaas oo dhami waxay isbeddelayaan si ka wanaagsan marka aan isticmaalno qaab-dhismeedka astaanta sida habka ugu muhiimsan.
Waxaa jira heerar taxane ah, si loo soo koobo si ka sii wanaagsan, waxaa jira wadar ahaan 3 heer oo ka caawiya naqshadeeyayaasha astaanta si ay u kala saaraan una dalbadaan noocyada iyo mashaariicda urur gaar ah:
Astaanta ganacsiga: Marka aan ka hadalno sumadda ganacsiga, Waxaan ka hadleynaa taxane ah oo alaabooyin iyo adeegyo ay bixiso shirkad mar haddii aan naqshadeynay astaanta. Sababtan awgeed, mar kasta oo aan ka hadalno calaamad ganacsi, waxaan ku xisaabtameynaa dhinacyo ay ka mid yihiin dadweynaha aan wax ka qaban doono, iyo sawirka muuqaalka ah ee aan u soo bandhigi doono qaybtayada gaarka ah.
Astaanta shirkadda: Waa halka ay ka timaaddo dhammaan qaybta naqshadaynta iyo samaynta summada: logo, isotype, imagotype, xubno garaafyada, xarfaha, midabada shirkadaha, calaamadaynta, iwm. Dhinacyada kale sida alaabada ama adeegyada ayaa iyaguna soo gala.
Summada Alaabta: Kuwani waa noocyo si gaar ah loogu nashqadeeyay qayb ama adeeg gaar ah, sida magaceedu tilmaamayo. Waxay la macaamilaan badeecad caalami ah waxaana loo qaabeeyey xeelad hore oo gaar ah.
Gebogebadii wax kasta oo kor lagu soo sheegay, naqshad-dhismeedka summaddu iskuma dayin oo keliya in ay la xidhiidho noocyada shirkad ahaan, laakiin sidoo kale waxay daryeeshaa qaybiyaan dhammaan hawlaha dhaqaale iyo dhaqaale ee shirkad gaar ah.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah inaad xasuusato oo aad fahanto waxa ay yihiin moodooyinka naqshadaha summada ee jira. Sidaa darteed, hoos waxaan u sharaxnaa iyaga si ka gaaban oo sahlan oo loo fahmi karo.
moodooyinka monolithic. Waxay kaloo yihiin moodallo loo yaqaan Brand of the House. Marka aan ka hadalno nooca noocaan ah, waxaan tixraacnaa, oo aan xoojineynaa, feejignaan gaar ah oo kala duwan iyo maaraynta hawlaha ugu faahfaahsan iyo muhiimka ah ee shirkadda. Xaaladdan oo kale, qaabka monolithic wuxuu isku dayaa inuu xoogga saaro dhismahan si aad u wanaagsan oo uu u horumariyo si habaysan oo fudud.
Tusaalaha cad ee astaanta ayaa ah summada caanka ah ee FedEx. Halka qiyamka kala duwan ee lagu soo bandhigay, waxay ku xiran yihiin si ay calaamaduhu u bixiyaan shakhsiyad gaar ah. Si kale haddii loo dhigo, qaabkani wuxuu isku dayaa inuu ku ururiyo hal calaamad dhammaan aaggiisa iyo badeecadaha ka jira cidda uu ku yaal.
Waxa kaliya oo ay la shaqeysaa noocyo ganacsi oo gaar ah oo sidaan ula macaamila badeecadaha, adeegyada ama ganacsiyada la midka ah.
Iyadoo laga sameeyay summada asalka ah, kobaca suuqa iyo horumarkiisa ayaa kordha. Maadaama ay tahay shay aad muhiim ugu ah suuqa.
Waxay soo saartaa miisaan dhaqaale oo waaweyn, habkan, waxay kordhiyaan oo ay fududeeyaan gelitaanka dakhliga badan ee shirkadda.
Khatarta waa la dhayalsan yahay, summadahana waxay u muuqdaan inay si yar u faafaan.
model la ansixiyay
Xaaladdan oo kale, calaamaddu waxay u shaqeysaa sida walxaha ugu muhiimsan ee mid kasta oo ka mid ah alaabtiisa, isagoo ku guuleysta dhagaystayaal aad u ballaaran. Waa nooc aad uga adag in la fahmo oo la maareeyo marka loo eego kuwa kale, maadaama lagu soo saaray summadaha iyo summada-hoosaadka. Maxaa ka dhigaya qorshaha waxaa loo furi karaa si aad u ballaaran, suurtogalnimadana waa saddex jibaaran tahay. Mid ka mid ah calaamadaha hogaaminaya horumarkan waa Danone.
Waxay isku daraan qaar ka mid ah qiyamka sida calaamadaha ay ka dhasheen, sida noocyada hooyada ama kuwa ay ka helaan aqoonsiga ama taageerada suuqa.
Waa calaamado tilmaamaya korriinka oo si fiican ugu shaqeeya koox ahaan. Markaa taageeridda iskaashiga iyo shaqada wadajirka ah.
Waxa kale oo ay leedahay khatar marka ay timaado maalgelinta, laakiin way ka yar tahay kuwa moodooyinka kale.
Qaabka summada madax-bannaan
Xigasho: Francisco Torreblanca
Waxay yihiin moodallo la shaqeeya magacyo halkaas oo ay ku dhaqmaan madaxbannaani gaar ah iyo madaxbannaanida suuqa iyo ujeeddooyinkooda oo ay u shaqeeyaan shirkad ahaan. model this Kala qaybsanaan weyn oo suuqa ah ayaa la gaaray, halkaas oo aad kula tartanto qaybiyayaal iyo tartamo kale oo isla dhex mara.
Waxay la tartami karaan noocyo kala duwan oo ku jira suuqa gaarka ah oo sidaas darteed soo jeedinta ama fikrado kala duwan.
Calaamaduhu inta badan way ku tartamaan midba midka kale, maadaama badeecada ama adeeggu ay isku mid yihiin oo ay tahay badeecad taageero u ah macaamiisha.
Caadi ahaan waa nooc ay si weyn u adeegsadaan shirkado abuura kala duwanaansho oo fahma xaalad ka duwan inta kale.
Waxaa jira dabacsanaan ugu badan ee iibka iyo iibinta shirkadaha ama noocyada iyo sidaas oo kale waxaa ku jira ficil madax-bannaan oo dheeraad ah.
Marka la soo koobo, nooc kastaa wuxuu ku tartamayaa qaab dhismeed kala duwan.
Sababaha loo abuuro naqshad dhisme
Waxaa jira qodobo kala duwan oo ay tahay in lagu xisaabtamo si loo abuuro qaab dhismeed sida aan ku naqaanay bilowga boostada. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la tixgeliyo qodobada qaar, maadaama ay kaa caawin karaan inaad si fiican u habayso astaantaada. iyo in la ogaado sida loo maareeyo marka laga eego dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalaha.
Koritaanka dabiiciga ah
Marka aan naqshadeyno sumad iyo shirkad, waa in aan xisaabta ku darnaa in waqtigan xaadirka ah aan dhigno suuqa ay si weyn u kori karto ama hoos u dhici karto. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la tixgeliyo qodobkan, maadaama shirkado badan Waxay bilaabaan tacaburrada iyagoon xisaabta ku darin dhinacyada ugu daran.
Tani waa meesha qaybo kala duwan laga sameeyay, qaybaha ganacsiga ayaa la isticmaalaa, khadadka alaabta ugu horreeya iwm. Waxay yihiin qaar ka mid ah walxaha, haddii qaab-dhismeedka wanaagsan aan xisaabta lagu darin, ay qaadan karaan khasaarahooda oo aan waligood si fiican u sheegin ganacsigaaga.
Suuqyadu waxa ay mar walba ahayd baahi iyo muhiimad aan waligeed loo soo bandhigin marka aynu samaynay sumad. Ma aha wax aad u adag in la ogaado, mar kasta oo aad ganacsi ka abuurto meel eber ah ama bilawdo, ganacsigaagu wuxuu u gudbi doonaa suuqa iyo hababka aad ku soo rogtay.
Sababtan awgeed, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo isticmaalka qaab-dhismeedka calaamad gaar ah, maadaama ay kaa caawin doonto inaad si fiican u fahamto sababta dhibaatooyin badan waxayna ku siin doontaa xalalka lagama maarmaanka ah si aad u sii wado koritaanka.
Waa qodob kale oo muhiim ah marka aan galno tacabur oo aan go'aansanno inaan bilowno ganacsi cusub. Balaadhintu waxay noqon kartaa mid qaran ama mid caalami ah waxaana lagu qeexaa horumarinta iyo qaybinta ganacsigaaga dalal ama magaalooyin kala duwan.
Waa mid kale oo ka mid ah walxaha ay ka baqayaan ganacsato badan ama naqshadeeyayaasha, maadaama ay had iyo jeer yihiin Waxay u muuqdaan inay ganacsigooda ku kobcinayaan meel gaar ah waxayna ka baqayaan inay ka baxaan aagga raaxada iyagoo ka baqaya in ganacsiga uu burburo. Iyo waxa badan oo aan ogayn waa in balaadhinta wanaagsan iyo maamulka ganacsiga ka caawisaa daawadayaasha badan, qiyamka dhaqaale ballaaran iyo qaybinta ballaaran oo la hagaajiyay ee shirkadda iyo alaabta.
Tani waa waxa ku dhacay noocyada blockbuster sida McDonald's. Kaasoo ka bilaabay magaalo yar oo Ameerika ku taal kuna koray mid ka mid ah warshadaha cuntada degdega ah ee ugu weyn adduunka.
Qaab dhismeedka astaanta ayaa horumar weyn ka keenay noocyo badan oo ka mid ah noocyada aan ognahay maanta. Mana aha in la filayo in ay noqdeen noocyada ugu wanaagsan ee suuqa, maadaama ay ka dambeeyaan naqshad qurux badan ama wanaagsan, waxaa jira waxyaabo taxane ah oo ka caawiya in ay si fiican u qaybiyaan shirkadda oo ay u dhigaan si ku qanacsan suuqa.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay kheyraadkan waxtarka leh ee ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar iyo noocyada weli soo socda. Shaki la'aan waa habka ugu wanaagsan ee fikradda iyo naqshadaynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » naqshadeynta astaanta